Chaza Isifuba Sakho Somoya - I-Global Allergy & Airways Patient Platform
Ngivame ukuvakashela abezimo eziphuthumayo noma ngihlale esibhedlela
Ngivame ukungabikho emsebenzini noma esikoleni ngenxa yesifuba somoya
Ngivame ukuzizwa sengathi akukho okusebenzayo ukusiza ngezimpawu zami
Ngivame ukuzwa ukuthi isifuba somoya silawula impilo yami
Ngiyakwesaba ukufa ngenxa yesifuba somoya
Isifo sami asikwazi ukubikezelwa ngokuhlaselwa yisifuba somoya njalo (ama-flare-ups)
Ngibe namasethi amabili noma ngaphezulu amaphilisi e-steroid ezinyangeni eziyi-12
Ngisebenzisa imishanguzo yokudambisa / yokutakula ngaphezu kokuphindwe kabili ngesonto noma ngabe ngithatha ama-inhaler (s) namaphilisi ami esilawuli
Ngisebenzisa ama-nebulizers njalo ukukhulula izimpawu zami
Angikwazi ukwenza izinto engifuna ukuzenza, njengokuvivinya umzimba noma imisebenzi yasendlini
Imvamisa ngidinga usizo kothile ukuze ngenze imisebenzi yami yansuku zonke, njengokupheka noma ukuwasha
Isifuba somoya sibeka ingcindezi ebudlelwaneni bami
Ngivame ukuphoqeleka ukwenza izinguquko engingazifuni empilweni yami yansuku zonke
Ngivame ukuzizwa ngicindezelekile noma ngikhathazekile ngenxa yesifuba somoya
Ngivame ukuzizwa ngikhishwa inyumbazane futhi ngingedwa
Ngivame ukuzizwa sengathi nginesisindo esinzima esicindezela esifubeni sami
Ukukhwehlela kwami ​​kuvame ukuphazamisa imisebenzi yami ejwayelekile
Izimpawu zami zivame ukungigcina ngiphapheme ebusuku
Angikwazi ukuhamba phezulu ngaphandle kokuphelelwa umoya
Ngikhohlwa ukuthatha i-inhalers yami yesilawuli
Ngiyayesaba imiphumela emibi yemithi yami yesifuba somoya
UKUSEKELA NELULEKO NGESIFO SESIFO SOMBEFU
Sacela umphakathi onenkinga yesifuba somoya ukuthi babelane ngamava abo ngalesi simo ukuze sakhe umhlahlandlela wokusiza abanye. Umhlahlandlela uletha ndawonye imicabango yabo, imizwa yabo, amathiphu abo asebenzayo nezeluleko, kuhlanganiswe nezindatshana ezivela kochwepheshe be-asthma abanzima.
PHILA IMPILO NGAPHANDLE KWEMIKhawulo
Ungahlushwa buthule - uma umuthi wakho we-asthma ungakusebenzeli, kungahle kube ngoba unohlobo lwesimo esihlukile. Ukukhuluma nje nodokotela wakho kungakunika ithuba lokubuyisela impilo yakho esimweni.
Kuthuthukiswe yiqembu lamazwe omhlaba leziguli, amaqembu abameli kanye nochwepheshe be-asthma njengengxenye yesinyathelo esiholwa yi-GAAPP, lolu hlu olusha lokuhlola lungakusiza ubone izimpawu zokuthi udinga ukuba nengxoxo nodokotela wakho mayelana nesifuba somoya.
Uma kusebenza noma yiziphi izimpawu 'ezicacile' (ezibomvu) kuwe, cela udokotela wakho ukuthi akudlulisele kochwepheshe. Uchwepheshe uzokwazi ukuhlola ukuthi unalo yini uhlobo oluhlukile lwesifuba somoya, nokuthi yini okufanele uyenze ngokulandelayo. Uma ezinye zezimpawu 'eziphathelene' (Ephuzi) zisebenza kuwe, noma ukhathazekile ngomthelela wesifuba somoya empilweni yakho, khuluma nodokotela wakho ngesikhathi sokuqokwa kwakho okulandelayo noma ngesikhathi sokubuyekezwa kwesifuba sakho esilandelayo. Ukuze sikusize uqale ingxoxo nodokotela wakho, hamba nalolu hlu lapho uya khona. Chaza i-Asthma yakho iholwa futhi iqondiswe yi-Global Allergy and Asthma Patient Platform (GAAPP) ngokubambisana nezinhlangano ezingamalungu abo. Lo mkhankaso usekelwa yi-GSK, ngosizo lwenhlangano ezimele yezokuxhumana kanye nesibonelelo semfundo.